China Atọ ọrụ ụlọ ọrụ ịsa ahụ na ndị na-azụ ahịa | Chengpai
Nọmba nlereanya CP-3T-RQ01
Echichi A rụnyere mgbidi
Showerdị elu ịsa ahụ
Hantified isi mmiri akụkụ 25x25x185mm
Ogologo igwe eji agba mmiri aka na aka 1500mm
Isi ịsa 304 igwe anaghị agba nchara, sịlịkọn
Igwekota 304 igwe anaghị agba nchara, plastic
Isi aka ịsa ahụ 304 igwe anaghị agba nchara, sịlịkọn
Handheld ịsa sooks 304 igwe anaghị agba nchara, plastic
Aka aka njide 304 igwe anaghị agba nchara
Net arọ (kgs) 7.90
Gross arọ (kgs) 8,50
Ejiri igwekota EE
Onye njide gụnyere EE
Isi na-aga n'ihu na eriri aka EE
Ikanam ọkụ gụnyere MBA
Mbukota Pee akpa, ụfụfụ na katọn
Oge nnyefe Daysbọchị 10
1.Ultra mkpa, 2mm oké.
2.Solid ewu nke 304 igwe anaghị agba nchara.
3.Easy dị ọcha. Enwere ike ihichapu slicon nozzles ngwa ngwa.
4.THREE ịgba ihe nakawa etu esi: efefe n’elu mmiri, nsụda mmiri, igwe na-asa aka.
Overlọ ịsa ahụ a na-anọ n'akụkụ anọ bụ ụlọ ịsa ahụ dị mkpa ma dị mma maka ime ụlọ ịwụ ahụ nke oge a. Ọ na-ewepụta ike dị egwu yana usoro ịgba agba atọ, nsụda mmiri, mmiri ozuzo na-elu na aka mmiri. Ọ na-agbakwunye akụkụ gị ọhụrụ, tinye ya na mgbidi ịsa ahụ gị, a na-ekesa mmiri na-enye ume ọhụrụ n'ahụ gị niile site n'ọtụtụ ya.
Isi igwe ịsa ahụ na-atụle 560 x 230 mm, na-ekwe nkwa ịsa afọ ojuju n'ọtụtụ nnukwu. Na ebughibu contours ya na purist na-egbu maramara Chrome, ọ na-agbakwunye mmetụ nke oge a na ime ụlọ ịwụ ahụ.
Ihe owuwu mmiri ozuzo a siri ike nchara nchara 304, siri ike na nchara nchara. Egwuregwu a na-emecha chrome elu na-eme ka isi mmiri ịsa ahụ mara mma na egwuregwu dị egwu na ime ụlọ ịsa ahụ ọ bụla.
Aka na-ejide mmiri ịsa ahụ nwere eriri 150cm nyere nke dabara adaba. Sa ahụ maka ụmụaka ma ọ bụ ndị okenye nwere ike ịbụ nsogbu. Ọ bụghị nke ukwuu na a aka ẹkenịmde ịsa isi. Ncha nwere ike ịsachapụ ngwa ngwa.
Iji mee ka nhicha dị mfe, silicone nozzles na-agbanwe agbanwe dị na nhazi nke ịsa ahụ na ịsa aka. Igwe dị elu, silicone na-eguzogide akwa dị mfe iji ete aka gị. Limescale na unyi na-apụ n'anya dị ka a ga-asị na anwansi, ị na-erite uru site na ahụmịhe jet na-asọ oyi oge ọ bụla. Ihe ịgba mmiri mmiri mara mma mgbe ị na-asa ahụ na ọbụlagodi mmiri mgbe ị na-asa aka gị na-eme ka ngwaahịa ndị a nwee ọ aụ iji.
Valvesa valvụ na abụọ ahụ ka nke siri ike 304 igwe anaghị agba nchara, ike ma sie ike, ga-esi na-eri eri. Igodo njikwa na-arụ ọrụ dị mfe, na-eme ka ịsa ahụ dị nro ma nwekwuo obi ụtọ ma na-ahapụ ihe ụtọ na akpụkpọ gị. A tonic maka mkpụrụ obi na spa nke gị.
Igwe mmiri a na-ekpuchi mmiri, aka ịgwọ mmiri na njikwa. Ọ bụ mgbidi ndokwasa na mfe echichi dị ka ya oge gboo mfe imewe.
Nke gara aga: Polish ịsa ahụ panel Anọ mgbidi mgbidi n'ịnyịnya
Osote: Super ebughibu square ịsa isi nke igwe anaghị agba nchara
Chromed ịsa ahụ Head
Isi mmiri ozuzo
Ìhè ịsa ahụ Head
isi mmiri ozuzo isi
Rv Rain ịsa ahụ Head
Wersa Isi Agba
Square ịsa ahụ Head
Zoro ikanam square ịsa ahụ isi
Mmiri mmiri ozuzo mmiri ozuzo na isi mmiri ozuzo isi
igwe anaghị agba nchara n’ala igbapu
ji achọ ihuenyo obubọk laser cuttig
Right n'akuku na okpomọkụ ngosi polished s ...
Otu ọrụ na-asa ákwà foset nke igwe anaghị agba nchara